mardi, 06 février 2018 19:37
Fianarantsoa: Lehilahy iray main'ny herinaratra 5000 Volts
Maty tsy tra-drano ny lehilahy 38 taona iray raha nisikotra manga tamin'ny vy ka nahakasika tariby mitondra herinaratra.
Teny Andranomalahelo eny amin'ny Fokontanin'i Rova no nitrangan'izany ny tolakandron'ity talata 6 febroary ity.
Nampikatso ny fikorian'ny famatsiana herinaratra izany tranga izany tao anaty minitra maro.
Nampiato ny fandefasana ny onjam-peo sy fahitalavitra mitoby eny an-toerana ihany koa izany nandritra io fotoana io.
mardi, 06 février 2018 19:21
Morondava: Nodoran'ny olona velona i Zaly, mpamono olona
Tratra ary dia niharan'ny fitsaram-bahoaka tao amin'ny fokontany Androvakely, Kaominina ambonivohitr'i Morondava ny alin'ny alahady 4 febroary i Zaly.
Malaso mpamaky trano sady mamono olona efa nokarohina nandritra ny enim-bolana mahery tato anatin'ny Distrikan'i Morondava ity farany.
mardi, 06 février 2018 19:09
Fianarantsoa: Manetsika ifotony ny ADN aty an-toerana
Nanomboka ny hetsika fampisiana fiaraha-miasa amin'ny fokontany ny Antoka sy Dinan'ny Nosy amin'ny alalan'ny fanadiovana teo Tambohobe ny andron'ity talata 6 febroary ity.
Izany dia natao teo ambanin'ny lohahevitra voizina antsoina hoe Ecolobus, izay anentanana eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy Zon'olombelona.
Nanatanteraka io fiarahana mandio amin'ny solontenan'ny mponina eo amin'ny fokontany io ny mpikambana ao amin'ity antoko politika nijoro volana vitsivitsy teto Fianarantsoa ity.
Andrasana eto an-toerana ny andron'ny alarobia 7 febroary kosa ny filoha mpanorana ny antoko mba hitondra fanazavana momba ny Federalisma Sahaza.